Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Shuurada Culumada Soomaalida Ogadeniya (UCSO) oo Kulan Yeeshay.
Golaha Shuurada Culumada Soomaalida Ogadeniya (UCSO) oo Kulan Yeeshay.
Posted by Wariye Qaran	/ August 24, 2018
Waxaa kulan muhiima isugu yimaaday golaha shuurada ee ururka culumaa u diinka soomaalida Ogaadeniya ee UCSO kulan ayaa waxaa kasoo qayb galay masuuliyiin badan oo ka socotay golaha shuurada ee culumada soomaalida Ogaadeniya.
Shirkan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Dhoobley ee dalka soomaaliya shirkan ayaa wuxuu bilawday markay taariikhdu ahayd 21/08/2018 wuxuuna soo dhamaaday 23/08/2018 kii waxaa looga hadlay qodobo muhuum ah oo ay kamid ahaayeen marxalada halganka Ogaadeniya iyo kaalinta kaga aadan culumada soomaalida Ogaadeniya.
Shirka ayaa waxaa kasoo baxay qodobo dhawr ah oo loogu talo galay sidii loo dar dar galin lahaa hawlaha u yaala culumada soomaalida Ogaadeniya ee ku aadan xoojinta halganka xaqa ah ee JWXO hormuudka u tahay iyo wacyi galinta bulshada soomaalida Ogaadeniya.
Shirka ayaa gaba gabadii wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaana lagusoo gaba gabeeyay duco iyo quraan akhris.